Nnwom 47 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Onyankopɔn yɛ Ɔhene wɔ asaase nyinaa so
‘Yehowa ho yɛ nwonwa’ (2)
Monto ayeyi dwom mma Onyankopɔn (6, 7)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Kora mma dwom.+ 47 Aman nyinaa, mommɔ mo nsam. Momfa ahurusi mmɔ ose mma Onyankopɔn. 2 Efisɛ Yehowa, Ɔsorosoroni no ho yɛ nwonwa,+Ɔyɛ Ɔhenkɛse wɔ asaase nyinaa so.+ 3 Ɔma yedi aman so nkonim,Na ɔde amanaman hyɛ yɛn nan ase.+ 4 Ɔpaw yɛn agyapade ma yɛn,+Agyapade a Yakob a ɔdɔ no no de hoahoa ne ho.+ (Sela) 5 Nkurɔfo rebɔ ose na Onyankopɔn aforo kɔ ne tenabea;Nkurɔfo rebɔ abɛn* na Yehowa aforo kɔ ne tenabea. 6 Monto ayeyi dwom* mma Onyankopɔn, monto ayeyi dwom. Monto ayeyi dwom mma yɛn Hene, monto ayeyi dwom. 7 Na Onyankopɔn ne asaase nyinaa so Hene;+Monto ayeyi dwom, na momfa nhumu nyɛ adwuma. 8 Onyankopɔn abɛyɛ Ɔhene wɔ amanaman no so.+ Onyankopɔn te n’ahengua kronkron so. 9 Aman no mpanyimfo aboaboa wɔn ho ano,Wɔne Abraham Nyankopɔn man. Efisɛ asaase so atumfo* nyinaa yɛ Onyankopɔn dea. Wama no so paa.+
^ Anaa “odwennini abɛn; torobɛnto”
^ Nt., “akyɛm.”